Ulwandle olumangalisayo Haus. (33-1), iiKunigiskes
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJurgita
Ibekwe ngokugqibeleleyo kwaye ibekwe phakathi kwehlathi lendalo lompayina, uhambo olufutshane kuphela ukusuka kunxweme oluhle lwesanti, le ndawo yokuphumla intle yeholide ihlala kwiindwendwe ezi-6.
Le gem encinci iya kuba yintandokazi eqinileyo kunye neendwendwe ezijonge iholide yokuphumla. Ilungele iintsapho, kukho indawo yokudlala ekufutshane.
Sinepropathi efanayo kuphuhliso ukuba awukwazi ukufumana ukufumaneka kule
Le ndawo yokubuyela ulwandle ixhotyiswe kakhulu inayo yonke into onokuthi uyifune ukuze uphumle kwaye uphumle. Ifakwe kakuhle kuyo yonke indawo kwaye inezinto ezininzi zokuchukumisa ngaphakathi, ibonelela ngobunewunewu obuphantsi. Inamagumbi okulala amabini, ikhitshi evulekileyo indawo yokuhlala enegadi ethe tyaba, indawo yokugcina iibhayisekile kunye nendawo yokupaka eyabiweyo.
Isifudumezi sendawo yangaphandle sisongezelelo esitsha kulo nyaka esiya kuvumela iindwendwe zethu ukuba zonwabele iingokuhlwa kwi-terrace ixesha elide.
Uyakufika elwandle ngendlela esanda kwenziwa ngaphantsi nje kwe-10min ngeenyawo
Ukuhlala ngoxolo kuyakhuthazwa apha ukuze kungabikho maqela angxolayo avunyelweyo. Ukutshaya kunqatshelwe ngokungqongqo, kukho iindawo ezikhethekileyo zokutshaya ezibonelelwe ngaphandle.
Kwi-cottage yeholide uya kufumana:
• umatshini wekofu
• umtshisi omncinci wokhuni
• intsimbi/ibhodi yokuayina
• iibhedi kunye neetawuli
• i-terrace ene-pergola kunye ne-heater
• ifenitshala yegadi & iijusi zangaphandle
• Ibarbecue/igrill skewers
• ibhedi yomntwana
• isitulo esiphezulu somntwana
• indawo etshixwayo yeebhayisekile/izitulo zokutyhala
• yabucala yokupaka free imoto enye
Simi eKunigiskes, kuphela idrayivu emfutshane ukusuka ePalanga Airport 3.4km, iziko leSixeko 3.5km, kunye ne-400m kuphela ukuya eLwandle. I-Wake Park kunye nePaki yokutsiba yamanzi yimizuzu embalwa kuphela ngemoto (okanye imizuzu eli-10 ukukhwela ibhayisekile). Eyona Cafe/Indawo yokutyela ekufuphi 400m (Meduza)
Nceda uqaphele-uphuhliso olutsha luyakhiwa kufutshane, kwaye ngeentsuku zeveki ezingekho ixesha lonyaka mhlawumbi kukho ingxolo. Ayikhange ibangele nayiphi na imiba ebalulekileyo kwiindwendwe zethu ukuza kuthi ga ngoku kodwa sifuna ukuba kwicala elikhuselekileyo kwaye ilumkise iindwendwe zethu kwangethuba. Akukho msebenzi wenziwayo ngeempelaveki.
Umbuki zindwendwe ngu- Jurgita
Ndiyafumaneka ukuba ndiphendule yonke imibuzo yakho kwaye ndinoMphathi weNdlu ozinikeleyo uAsta odibana kwaye abulise imibuzo ekufikeni nasekuhambeni. Ngokufika kade sinokhetho lokuzihlola olufumanekayo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Palanga